အေထြေထြဗဟုသုတ Archives - SonSon LinLin
ဟင်းခတ်မှုန့်အဖြစ် အသုံးပြုနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်နှင့် အထူးဂရုပြုသင့်သော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်
February 6, 2022 sonsonlinlin 0
ဟင်းခတ်မှုန့်အဖြစ် အသုံးပြုနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်နှင့် အထူးဂရုပြုသင့်သော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် ၁၉၀၈-ခုနှစ်မှ စ၍ ဂျပန်ပါမောက္ခ ကီရာနအဲ အီကဲဒါဆိုသူက ဂျုံ၊ကြံ၊ ပီလောပီနံဥ၊ ရေညှိစသည့် သဘာဝပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဂလူတာမိတ်(GLUTAMAIE)ဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်၍ ဆိုဒီယမ်ဆားတို့ ပေါင်းခံလိုက်သောအခါ ဟင်းခပ်လျှင် အရသာရှိသော MONOSODIUMGLUTAMATE) MSGခေါ်အချိုမှုန့်ကို ရသည်။ အဆိုပါအချိုမှုန့်ကို အာဂျီနိုမိုတိုဟု အမည်ပေး၍(AJINOMOTO) ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ချီလိုက်ရာ လူသားတို့နှစ်သက်စွဲလန်းသွားကြသည်နောက်ပိုင်း၌ ပီလောပီနံဥစသော သဘာဝပစ္စည်းတို့ကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ […]
ဒီ အဖြစ်ပျက်လေးမှ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြပါစေ
“ကားအကောင်းစားကြီးကိုမှ တိုက်မိတဲ့ ဆိုင်ကယ်သမား နှင့် “ကိုယ့်သက်တမ်းကိုသူများဆီခွဲမပေးနိုင်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ကားပိုင်ရှင် လမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကား အနောက်ကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက ဝင်တိုက်တယ်။ကွဲသွားတဲ့ ကားနောက်ပိုင်း စကတ်ကိုကြည့်ရင်း ဘရမ်းနယူး ကားအသစ်မို့ နှမျောစိတ်ကရင်ကို ဆို့တယ်။လမ်းဘေးမှာ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းရပ်ထားရက်နဲ့လာတိုက်တဲ့သူကို ဒေါသထွက်တယ်။ ပုံစံကြည့်တော့လည်း တရုတ်ဆိုင်ကယ်အစုတ်နဲ့မီးသွေးတင်တဲ့ အလုပ်သမား ထင်ပါရဲ့..။လျော်နိုင်ပုံလည်း လုံးဝ မပေါ်။ “မင်းဘာဖြစ်သွားလဲ..”ဆိုပြီး မေးတော့ “ဘာမှ မဖြစ်ဘူး..”တဲ့။ “ဘာမှမဖြစ်ရင် ငါတို့ သွားပြီကွာ..”ဆိုပြီးကျွန်တော် ကားပေါ်တက် […]
ဆရာမင်းလူရဲ့ အတွေးအခေါ်ကတော့ ဒီနေ့ ခေတ်နဲ့ ကွက်တိပါပဲဗျာ
February 2, 2022 sonsonlinlin 0
(၁) ဘတ္စ္ကား စပယ္ယာက လက္ၾကားထဲတြင္ အလ်ားလိုက္ေခါက္ၿပီး ညႇပ္ထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားထဲမွ က်ပ္တန္ေလး႐ြက္ကို ဆြဲထုတ္ၿပီး 8220;ငါးက်ပ္တန္ေပးတာ ဘယ္သူလဲ ဟု ေမးသည္။ ဒီမွာ လူေတြၾကားထဲက လက္တစ္ဖက္ လွ်ိဳထြက္လာသည္။ စပယ္ယာက ျဖန္႔ထားေသာ လက္ထဲသို႔ က်ပ္တန္ေတြ ထည့္ေပးသည္။ လက္ကိုဆုပ္ၿပီး ျပန္႐ုပ္သြား၏။ ဘတ္စ္ကားသည္ တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ မအူကုန္း၊ သိမ္ျဖဴ စသည္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ေမာင္းႏွင္လာသည္။ လမ္းသုံးဆယ္ မွတ္တိုင္မွာ ရပ္ေသာအခါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား […]
November 19, 2021 sonsonlinlin 0
လာမယ့္ နိုဝင္ဘာလ(၁၉)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ရာစုႏွစ္တစ္ေလၽွာက္ အရွည္ၾကာဆုံးလၾကတ္ခ်ိန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေတြ႕ၾကဳံရလိမ့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါလၾကတ္ခ်ိန္ဟာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ညေနပိုင္း (၆း၅၈)နာရီကေန (၈း၀၃)နာရီအထိ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ေၾကာင္း National Planetarium က တြစ္တာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ေမလက ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ေသြးေရာင္လႊမ္းလျပည့္ညဆိုတဲ့ သမိုင္းမွာၾကဳံေတာင့္ၾကဳံခဲအျဖစ္ကို ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ၾကဖူးပါလိမ့္မယ္။ ယခုေတြ႕ၾကဳံရမယ့္ လၾကတ္ျခင္းကို Penumbra Lunar Eclipse လို႔ အမည္ေပးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ […]
ႏွစ္ေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္က ရင္ေငြ႕ေတာ္လူံခဲ့တဲ့ အရွင္ရာဟုလာ ႐ုပ္ပြါးေတာ္ မ်က္လုံးေတာ္ပြင့္ၿပီ….
နှစ်ပေါင်း ၂ ထောင်ကျော်က ရင်ငွေ့တော်လူံခဲ့တဲ့ အရှင်ရာဟုလာ ရုပ်ပွါးတော် မျက်လုံးတော်ပွင့်ပြီ…. အရှင်ရာဟုလာ မျက်လုံးတော်ပွင့်ပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၂ ထောင်ကျော်က ရင်ငွေ့တော်လူံခဲ့တဲ့ ရုပ်ပွါးတော် ၈၀ ထဲကအရှင်ကိသာမေတ္တယျ ရဟန္တာ မျက်လုံးတော် ပွင့်ပြီးနောက်အရှင်ရာဟုလာ ပါ ပွင့်တော်မူပါပြီဖူးမြော်နိုင်ပါစေ။ ရဟန္တာ၈ဝရှေးဟောင်းမဟာသိမ်တော်ကြီး အရှင်ရာဟုလာ မျက်လုံးတော်ပွင့်ပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၂ ထောင်ကျော်က ရင်ငွေ့တော်လူံခဲ့တဲ့ ရုပ်ပွါးတော် ၈၀ ထဲကအရှင်ကိသာမေတ္တယျ ရဟန္တာ မျက်လုံးတော် ပွင့်ပြီးနောက်အရှင်ရာဟုလာ ပါ […]
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမသိေသးတဲ့ ပိုက္ဆံအိပ္အေရာင္ အယူဆမ်ာ…
“ပိုက်ဆံအိတ် အရောင်အယူအဆ” ရွှေရောင်က- ရွှေငွေ ဥစ္စာ မြဲစေပါတယ် အပြာရောင်က -ဝင်တာလွယ်ပြီးထွက်တာလည်းလွယ်ပါတယ် အနီရောင်က -များများဝင်တယ် မြန်မြန်ထွက်တယ် အဖြူရောင်က -လာဘ် တိတ်တယ် ပန်းရောင်က -ပီယကောင်းတယ် အညို ရောင် အစိမ်းရောင် ကော်ဖီရောင် ခရမ်းရောင် အနက်ရောင်တွေက-လာဘ်ရွှင်ပြီး ငွေ မြဲတယ် ပိုက်ဆံအိတ်ကို မကြာခဏ လဲပေးပါ သိမ်းလည်းမထားပါနဲ့ဟောင်းစုတ်ရင်မသုံးပါနဲ့ ဖုန်းရွှေပညာ Credit- Zawgyi “ပိုက္ဆံအိတ္ အေရာင္အယူအဆ” ေ႐ႊေရာင္က- ေ႐ႊေငြ […]
November 11, 2021 sonsonlinlin 0
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေကြသော အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ပန်းရံသမားများ စသဖြင့် ဘိလပ်မြေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူအားလုံး သိစေဖို့အတွက် ဘိလပ်မြေ အတုအစစ် ခွဲခြားနည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ၁။ ဘိလပ်မြေအမှုန့် အနည်းငယ်ကို ရေဖျော်ပြီး အလုံးကလေး(၂)လုံး၊ (၃)လုံးခန့်လုံးပြီး ခဏအခြောက်ခံထားပါ။ (၂)မိနစ်ခန့် ကြာသော် ထိုဘိလပ်မြေလုံးများအား လက်ဖြင့်ဖိခြင်း၊ ဖျစ်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ လုံး၀ ကွဲအက်မသွားဘဲ သံခဲ၊ ကျောက်ခဲကဲ့သို့ မာနေလျှင် ဘိလပ်မြေ စစ်သည်။ ကွဲအက်သွားပါကဘိလပ်မြေ […]
ကြိုက်တဲ့စာအိတ်ရွေးပါ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက် သင်ရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်
ႀကိဳက္တဲ့စာအိတ္ေရြးပါ ေရးထားတဲ့ စာေတြ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ သင္ရဲ့စိတ္ထားကိုေျပာျပေပးလိုက္မယ္ ဒီစာကို ဖတ္ေနသူေရ, တစ္ခါတစ္ေလမွာ မင္းဟာ ေအာင္ျမင္မွာပါ ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မယုံၾက တာမ်ိဳးရွိ တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတာင္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့တာကို မင္းေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ မထင္တာ ဒါသဘာဝ ပါ မင္းတစ္ခုခု အမွားလုပ္မိတဲ့ အခါျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႔ ဟဒါသထြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္သြားရင္ျဖစ္ျဖစ္ မင္းကို အရႈံးသမားလို႔ လူေတြက ေျပာၾက လိမ့္မယ္။ […]
အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ဇလားဗီးယား ငါးကို လုံးဝမစားပါနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း မျှဝေပေးကြပါဦးနော်
November 10, 2021 sonsonlinlin 0
အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင် ဇလားဗီးယား ငါးကို လုံးဝမစားပါနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း မျှဝေပေးကြပါဦးနော် ကျွန်တော် တို့ ဇလား ပီးယားငါးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် ။ မွှေးနေတဲ့ ငါးကင်ကို စျေးကြီးပေးပြီးတော့ကိုစားတယ် ၊ စားလို့လဲကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတော့ မစဉ်းစားမိကြဘူး ။ ဇ လားဗီးယားငါးတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ကျယ်ပြန့်စွာမွေးမြူပြီးစားသုံးနေကြတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ကင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုချက်စားစား စားကောင်းပြီး စျေးနှုန်းလည်း […]